Shina 60MM / 2.4 Inch Magnetic Grinder Hexagon 4 Piece Zinc Alloy Spice Griss Manufacturing and Factory | Hemgrinder
Vatosoa vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy - Fitiavana mavesatra lehibe mavesatra 4 misy efitrano rehetra mifandraika amin'ny magneto, mampamora ny ahitrao ary esorina ilay ahitra.
Item No .: GSRP2584
Color: Gray / Silver / Rose Gold
Mitombo ny lanjany: 323g
Habe (D * H): 2.36 x 2.48 santimetatra (60 x 63mm)
Habe (Diameter x Haavo): 2.36 x 2.48 santimetatra (60 x 63mm)
• Vatosoa vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy - Fitiavana mavesatra lehibe mavesatra 4 misy efitrano rehetra mifandraika amin'ny magneto, mampamora ny ahitrao ary esorina ilay ahitra.
• Ity milina platinum namboarina avy amin'ny vy vita amin'ny vy vy sy mateza. Ny nify miforitra amin'ny nify dia manome antoka anao ho malefaka sy manosotra mahomby. Ny halalin'ny nify maranitra dia 0.39 '' mba ahafahanao mifangaro ahitra bebe kokoa indray mandeha ary tsy hitondraka ny sisiny.
• Vary mihosin-kodiarana tonga lafatra amin'ny fikosoham-bary ny ravina voankazo maina rehetra. Adidy mavesatra sy fahaiza-manao be dia be no mahatonga ny fitroarana rivo-mahery.
• Grinders maina ahosotra makiazy miaraka amin'ny efitrano 4, mora aparitaka haingana 4 ary satria tsy misy kofehy dia ho mora ny hadio.
• LARGE CATCHER - Tonga amin'ny efijery mesh izay maka sy manivana ny ahitra tena tsara ho an'ny mpanao hazandrano lehibe iray.
• Ampiasao NY TANINDRAZANA TSY MISY AZONY - Tsy toy ny grinders hafa izay mihintsana ahitra kely ary noho izany dia mahatonga anao mikotrona kely kely fotsiny, ny rozomaintsika dia misy 2.36 "lehibe miaraka amin'ny efi-trano lalina izay mitazona ahitra, izay midika fa ho afaka ianao mifangaro zezika bebe kokoa indray mandeha.
• Functional! Ny grinder premium dia ao amin'ny habeny tonga lafatra ho an'ny tanjona portable sy an-trano. Tsara sy mavesatra ny lanja, fa tsy navesatra be loatra. Ny GIFT FOTOTRA O! Raha tsy mividy izany amin'ny tenanao ianao dia fividianana iray amin'ny namanao ho fanomezana.